मृतकका परिवारले पाए १ करोड ३२ लाख बीमा दाबी भुक्तानी « News24 : Premium News Channel
पोखरा, ४ माघ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन बीमा गराएका स्व. सुरेश बहादुर केसीको परिवारलाई रु १ करोड ३२ लाख ५० हजार मत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोरोनाको कारण मृत्यु भएका केसीका परिवारलाई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनि पोखरा प्रमुख लगायतको टोलीले केसीकी श्रीमति र दुई बच्चालाई सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
केही समय अगाडी कोरोनाको कारण मृत्यु भएका केसीले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा जिवन बिमा गराएका थिए । करीब १ करोडको जिवन बिमा गराएका केसीले ५ किस्ता मात्र बुझाए पछि उनको निधन भएको थियो । सो बिमा वापतको रकम परिवारले बुझेपछि मृतककी श्रीमति चिनुमाया केसीले आफुहरुले बिमा वापतको रकम पाएको बताएकी छिन । श्रीमति केसीले श्रीमानको मृत्यले दुखित भएता पनि परिवारका लागी सो बिमा रकमले सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
श्रीमानको निधन भए पछि अब के गर्ने होला ? भन्ने पिर आफुलाई लागेको बताउनुभयो । तर श्रीमानले बेलैमा बिमा गरेका कारण सो रकमले आफुहरुलाई परिवारमा आर्थिक रुपमा केही सहयोग पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । बिमाको रकम बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भ्रम मात्र रहेको र आफुले बिमा वापतको रकम तुरुन्त पाएको केसीले बताउनुभयो ।
सो मृत्यु दाबी वापतको रकम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका क्षेत्रीय प्रमुख पोखराका दशरथ झा , पोखरा शाखा प्रमुख कुशल सिंह थापा र बरिष्ठ अभिकर्ता प्रबिन पोख्रेलले मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा क्षेत्रीय प्रमुख पोखराका दशरथ झा ले कम्पनिले मृत्यु दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । त्यस्तै बरिष्ठ अभिकर्ता प्रविन पोख्रेलले छिटो छरितो मृत्युदाबी भुक्तानीका कारण बिमाप्रति आम मानिसको बिश्वास बढेको बताउनुभयो । पोखरा शाखाका प्रमुख कुशल सिंह थापाले जीवन बिमाको महत्व बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।